QM oo dib u billowday mushaarka Ciidanka Kenya ee AMISOM – Hornafrik Media Network
QM oo dib u billowday mushaarka Ciidanka Kenya ee AMISOM
By Liibaan Nuur	 On Apr 22, 2019
Muqdisho-Hornafrik-Qaramadda Midoobay ayaa dib u billowday bixinta mushaaraadka Ciidanka Kenya ee qaybta ka ah Howlgalka Nabad ilaalinta Midowga Africa ee AMISOM waxaana Bishii March ee sanadkaan ay Ciidanka Kenya heleen 3.75 million oo shillinka Kenya ah.
Lacagtaan waxaa la bixin doonaa Sexadii biloodba mar, waxaana ciidanku ay heleen lacagihii ka maqnaa muddo Todobo bilood ah.
Dowladda Kenya ayaa muujisay walaaceeda ku aadan dhaqaale xumadda heeysta ciidankeeda jooga Soomaaaliya ee ka tirsan Holgalka AMISOM. Waxay si is daba jog ah cabashadeedda ugu gudbisay Qaramadda Midoobay.
Inkastoo ay Qaramadda Midoobay dib u billowday bixinta Mushaarka ciidanka Kenya ee Soomaaliya, hadana lacagtaasi waxaa ay ka yartahay middii ay ciidanku helayen xillugaan oo kale Sanadkii 2018kii.
Ciidanka Midowga Africa ee Soomaaliya oo dalka muddo ka badan 10 sano ayaa hela dhaqaale ka badan mida ku baxa Ciidanka Soomaaliya. Qubaradda Amniguna waxay dhiiri galiyaan in Ciidanka Soomaaliya lagu bixiyo Qarashka Howlgalka si ay awood ugu yeeshaan in ay dalka amnigiisa gacanta ku dhigaan.
Kulan aqoon isweydaarsi ah oo Muqdisho uga furmay Golaha Shacabka (BFS) iyo Golaha Wakiilada Puntland
Wasiir Cawad oo guddomiyay shir lagu qabtay Dalka Masar